မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံးသော ငါးလုပ်ငန်း နှင့် ရေသတ္တဝါမွေးမြုရေး သိပ္ပံဘွဲ့၂၀၁၈ ခု ဒီဇင်ဘာ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်။ | MYSAP
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံးသော ငါးလုပ်ငန်း နှင့် ရေသတ္တဝါမွေးမြုရေး သိပ္ပံဘွဲ့၂၀၁၈ ခု ဒီဇင်ဘာ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် (၁၄) ရန်ကုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍသည် နှစ်စဉ်တိုးတက်လျက်ရှိနေပြီး ပြည်သူများ အာဟာရပြည့်ဝရေး ၊ ဝင်ငွေ နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိစေသော နိုင်ငံခြားငွေရှာဖွေပေးသည့် ကဏ္ဍ ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၇၁၁ တန်ဖိုးရှိ ငါး လုပ်ငန်း ထုတ်ကုန် တန်ချိန်ပေါင်း ၅၆၀ဝဝဝ တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ကာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ပို့ကုန်စံချိန်တင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည်ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအလားအလာများကြောင့် နိုင်ငံ့ဦးစားပေး အဖြစ် သတ်မှတ် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသလို ငါးလုပ်ငန်းအထူးပြု ကျွမ်းကျင်သူ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ၊ ငါးသယံဇာတများ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် နှင့် ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ငါးလုပ်ငန်း တက္ကသိုလ် ထူထောင် နိုင်ရန် လွှတ်တော်မှအတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။
“ရေသတ္တဝါမွေးမြုရေး နှင့် ငါးထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားလာခြင်းနှင့်အတူ ထုတ်လုပ်သူတွေ ဈေးကွက်ဖြန့်ချီသူတွေ ကအဆင့် မြင့်နည်းပညာတွေ အသုံးချနိုင်တဲ့ အထူးပြုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ အလွန်လိုအပ်လျက် ရှိပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း နိုင် ငံတွေ နဲ့ ယှဉ်ရင် ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးနဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပညာရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကအတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ နောက်ကျ နေပါသေးတယ်။ Can Tho University၊ Vietnam National Academy of Agriculture ၊ Asian Institute of Technology (AIT) စတဲ့ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်းတက္ကသိုလ်တွေကနေ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘွဲ့ကြို ၊ ဘွဲ့လွန် သင်တန်း တွေဖွင့်လှစ် နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာငါးလုပ်ငန်းတက္ကသိုလ် တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာဖို့ ပေါ် ပေါက်ရေး ကြိုးစားနေစဉ်ကာလအတွင်း ၎င်းဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ B.Sc. (Fisheries and Aquaculture) ဘွဲ့ပေး အပ်နိုင်ရေးအတွက် ယခုပညာသင်နှစ်မှစပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပထမနှစ် ကျောင်းသားတွေ ပညာသင်ယူနိုင်ရေး အလေးထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် က ပြောကြား ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့် ဂျာမနီအစိုးရတို့မှာ ရံပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသော မြန်မာရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး ရေး စီမံကိန်း(MYSAP) သည် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ၊ အာဟာရမြင့်မားရေး နှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလား အလာများကို အလေးထားပြီး ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် GIZ တို့မှ ပူးပေါင်းအကောင် အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။ ဤသို့ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ပညာရေး ၊ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများကို ထောက်ပံ့မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
“တက္ကသိုလ်အဆင့် ရေသတ္တဝါမွေးမြူုရေးဆိုင်ရာ သင်ရိုး တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ သင်တန်းတွေ ကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သတ္တဗေဒဌာန ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တို့ နဲ့အတူ မြန်မာ ရေသတ္တဝါ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း(MYSAP) က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ငါးလုပ်ငန်း နှင့် ရေသတ္တဝါ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ သိပ္ပံဘွဲ နဲ့ မဟာ သိပ္ပံဘွဲ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက် MYSAP ကနေ ကူညီပံ့ပိုး လျက်ရှိ ပါတယ်” ဟု မြန်မာရေ သတ္တဝါ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (MYSAP) အကြီးအကဲ Peter Buri က ပြောကြားပါသည်။
“ရေသတ္တဝါမွေးမြုရေး နှင့် ငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာတွေ နဲ့အတူ လက်တွေ့သင်ကြားမှုတွေ ပေါင်းစပ် ပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် B.Sc. Fisheries and Aquaculture သိပ္ပံဘွဲ့ သင်ရိုးကို စီမံရေး ဆွဲထားပါတယ်။ ဇီဝဗေဒ အနည်းဆုံး ၇၅ မှတ် ၊ အင်္ဂလိပ် စာ အနည်းဆုံး ၆၀မှတ် ရှိပြီး စုစုပေါင်း ရမှတ် ၄၂၀ ရ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူတွေအနေနဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အထူးပြုဘာသာရပ်ကို လျှောက် ထားနိုင် မှာဖြစ်ပါ တယ်” ဟု တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကေလွင်ထွန်း ၊ သတ္တဗေဒဌာန ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှ ပြောကြားပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၊ သတ္တဗေဒဌာနသည် ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျောင်းသား ၅၀ ဦးလက်ခံသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရေသတ္တဝါမွေးမြုရေး ကဏ္ဍ သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလားအလာ ကောင်းသည့်အလျောက် ဤဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိ ပြီးသူများသည် ငါးမွေးမြူရေး မန်နေဂျာ ၊ ငါးရောဂါဗေဒကျွမ်းကျင်သူ ၊ ငါးအစာအာဟာရပညာရှင်၊ သဘာဝပတ် ဝန်း ကျင် နှင့် ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် ငါးပုစွန်သားဖောက်စခန်း မန်နေဂျာ စသောအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များရရှိနိုင်ပါသည်။
“လက်တွေသင်ခန်းစာနဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်း အတွေ့အကြုံတွေပို့ချပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ကွင်းဆင်းစခန်း ရေသတ္တဝါ မွေးမြုရေး လုပ်ငန်းသုံး စနစ်တွေ ဌာနမှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယနှစ်ကျောင်း သားတွေ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံရနိုင်စေဖို့ ငါး/ပုစွန်မွေးမြုရေးကန်၊ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ငါးအစာစက်ရုံ ၊ငါးတန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန် စက်ရုံ၊ ငါးအစာစက်ရုံ ၊ငါးသားဖောက်စခန်း စတဲ့ နေရာတစ်ခုခုမှာ တစ်လတာ အလုပ်သင် ဆင်းရမယ့် အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ ကေလွင်ထွန်း မှ သင်ကြားရေးပုံစံနှင့် စပ်လျဉ်းပြီးပြောကြား ပါသည်။